'Jurassic Park' Reeboks Bịa na Ejiri na Cryo Barbasol Can - iHorror
Mbido Ihe Dị jụụ Buyzụta 'Jurassic Park' Reeboks Bịa na Ejiri na Cryo Barbasol Can
'Jurassic Park' Reeboks Bịa na Ejiri na Cryo Barbasol Can
by Trey Hilburn III July 19, 2021
by Trey Hilburn III July 19, 2021 2,646 echiche
Ọ dịghị onye lekọtara anya na Dr. Lewis Dodgson na-ezute Dennis Nedry, belụsọ Dr. Lewis Dodgson. Agbanyeghị, anyị niile lebara anya nke ọma Dodgson, 007 na-elele Barbasol cryo unit maka DNA dino nwere ike. O doro anya na dị ka anyị si mara, Nedry butere ọrụ nke ibanye ndị na-a sucụ mmiri ahụ n'agwaetiti ahụ, mana ọ naghị agbanwe eziokwu ahụ bụ na etinyere ndị na-akwado Fans ebighebi, ite Barbasol. Na, ọ dịka ọ nwere ike iti Reebok ihe.
ndị ọhụrụ Jurassic Park X Reebok mmekọrịta dị ezigbo mma. Ọ dịkwa oke mma na, ebe m tụrụ anya na nkwalite a ga-abụ naanị otu ụdị akpụkpọ ụkwụ anyị na-enweta n'eziokwu ọnụọgụ ole na ole nke ọ bụla nwere agba nke ha.
Ihe kacha adọrọ mmasị banyere mmekọrịta anyị niile ga-abụrịrị nkwakọ ngwaahịa m. Akpụkpọ ụkwụ Omni Zone II batara na ngwugwu ahụ, Barbasol nwere ike si. Nke kachasị, ọ dị ka apịtị ga-ekpuchi ya, nke pụtara na ngwugwu a ga-egosi na Nedry nwere ihe ịga nke ọma na ọrụ nzuzo ya. Ntabi, iku anya.
Nchịkọta Reebok dum nwere ọtụtụ akpụkpọ ụkwụ, tinyere ụfọdụ tee-shirts na ezigbo mma na-achọ uwe. Reebok na-agbada ihe ọma ndị a niile na Julaị 30, n’elekere itoolu nke CDT. Can nwere ike ịgafe ebe a iji lee anya na mma niile mara mma… na akwa ahu sweet nke di nma.